“Mobil money” : Fanaovan’ny sasany asa fisolokiana -
AccueilSongandina“Mobil money” : Fanaovan’ny sasany asa fisolokiana
07/05/2018 admintriatra Songandina 0
Lehilahy iray indray no fantatra fa naiditra am-ponja vonjimaika noho ny resaka fisolokiana tamin’ny alalan’ny fandefasam-bola na “mobil money” nividianana fiara “starex” tamin’ny fampiasana Orange money hosoka. Tamin’ny fakana am-bavany azy no nahazoam-baovao fa niainga tamin’ny fifanarahana ara-barotra izy ity, ka milaza ity farany fa alefa amin’ny alalan’ny tambazotra fandefasam-bola orange money ny vola. Tsy vitan’ny vola kely anefa no nifanarahana tamin’ity fivarotana fiara ity, izay voalaza fa mahazo ny hafatra fohy rehefa mahazo izany ka iny indray no entiny hangalana ny vola eny amin’ny toeram-pandefasana sy fandraisana mifanaraka amin’izany. Niha nahazo vahana mihitsy tato ho ato ity fisolokiana amin’ny alalan’ny fandefasam-bola ity, izay efa maro no lasibatra tamin’ny hosoka vokatr’ity fampiharana tsotra novokarin’ny tambazotra miasa eto amintsika.
Araka izany dia fantatra fa mandray andraikitra tanteraka manoloana ity toe-java-mitranga ity ireo tambazotra voatonontonona amin’ity resaka fisolokiana ity. Isan’izany ny polisy avy etsy Tsaralalàna, izay nahazoana tatitra fa maro an’isa ireo fitarainana voaray mahakasika ity fisolokiana volabe sy fivadiham-pitokisana ity. Toa ity lehilahy iray lasibatra tamin’ny fivarotana ireny fiara lafo vidy ireny, ka voasoloky tamin’ny sora-bola mitentina 60 tapitrisa Ariary, izay efa lasan’ireo mpisoloky tamin’izany ny fiara marika” Starex “araka ny loharanom-baovao. Nilaza moa ralehilahy tamin’izany fa “tsy misy ahafantarana azy ho hosoka mihitsy raha naharay ny hafatra manambara fa naharay ny vola ny tenany”.